Guddoomiyaha Gobolka Gedo oo lacag loogu talagalay Gurmadka Fatahaada ku wareejiyay Maamulada degmooyinka Doolow,Baladxaawo iyo Luuq – Radio Muqdisho
Guddoomiyaha Maamulka Gobolka Gedo Mudane Maxamed Muxumed Aadan oo maanta gaaray degmada Doolow kana yimid magaalada Muqdisho ayaa maamulada iyo qeybaha kala duwan ee Bulshada degmooyinka Doolow,Baladxaawo iyo Luuq ku wareejiyay deeq Lacageed oo ka timid Guddiga Gurmadka Qaran ee Fatahaada dalka.
Deeqdan lacageed ayaa la gaarsiin doonaa Qoysaskii ku barakacay Fatahaada Wabiga Jubba iyo Daawo ee mara saddex degmo oo muhiim ah.
Guddoomiyaha Gobolka Gedo Maxamed Muxumed Aadan oo ugu horeyn ka hadlay goobta lacagta gurmadka Fatahaada lagu wareejinayay ayaa sheegay in lacagtaan ka timid Guddiga Gurmadka Fatahaadaha dalka,islamarkaana loogu talagalay in wax loogu qabtay dadka ay Fatahaada saameysay.
Guddiga Gurmadka degmooyinka Doolow iyo Luuq ayaa lagu wareejiyay lacag dhan 18,000 ,halka Guddiga Gurmadka Fatahaada ee degmada Baladxaawo lagu wareejiyay lacag gaareyso 10,000 oo doolar.
Qaar ka mid ah dadkii lacagta lagu wareejiyay oo goobta ka hadlay ayaa ku ammaanay Dowladda Soomaaliya sida marka waliba u garab taagan tahay Shacabkeeda.
Fadaa’isha bisha barakaysan ee Ramadan (MAQAAL)